About Us - CU Mandalay
Foundation Date and History
It was opened in 2nd February, 2002. It isathree-storeyed concrete building and started building made of concrete in7July, 2003. This building is 569 feet long and 313 feet. Each storey is 14 feet hight and totally 56 feet and6inches high. This building has 48 rooms and each room is (40 ✕ 30 ) feet wide.
According to the instruction of Government Authority, the University of Computer Studies started its construction site cleaning and collecting building materials in May, 2003. NaungTong Construction Computer constructed with machine and labour force in 1st July, 2003. The University of Computer Studies was upgraded from Government Computer College to the University of Computer Studies in 20 January, 2007 according to the date of 19 January, 2007 reference number 01/NYK (U)/Swa-1, the office of Chairman of the state Peace and Develoment Council.
(က) Building Layout Plan
(ခ) Google Map Plan
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အား သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဖြင့် ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုတိုးတက်သော နိုင်ငံတော် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိစေရန် အတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာရှင်များ မွေးထုတ် ပေးခြင်း၊ နည်းပညာသစ်များ စမ်းသပ်တီထွင်နိုင်ရန်နှင့် လက်တွေ့အသုံးချ နိုင်ရန် သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော သတင်း အချက်အလက်နှင့် နည်းပညာရပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
The University of Computer Studies intend the Republic of the Union of Myanmar to beadeveloped nation with information technology and catch up with International by teaching and training how to innovate modern Technology, how to apply it and by producing technicians.
ပါမောက္ခချုပ်/ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ တည်ဆောက်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးတာဝန်များအား ဒေါက်တာစန်းစန်းတင့် (ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်)မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Rector/ Pro-Rector / Principal
Pro-Rector Dr. San San Tint held responsible for this University’s administration, construction and security.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
Opening Training Subjects
Academic training of 2020-2021 academic year of the University of Computer Studies are following.
စဉ် ဘာသာရပ် ပေးအပ်သောဘွဲ့ သင်တန်းကာလ
၁။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (B.C.Sc) (၅)နှစ်
၂။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့ (B.C.Tech) (၅)နှစ်
၃။ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (M.C.Sc) (၂)နှစ်
၄။ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့ (M.C.Tech) (၂)နှစ်
Offering Degree and Academic Period
No. Subject Degree Period
1 Computer Science B.C.Sc. 5years
2 Computer Technology B.C.Tech. 5years
3 Master of Computer Science M.C.Sc. 2years
4 Master of Computer Technology M.C.Tech. 2years
စဉ် ပညာသင်နှစ် ရိုးရိုး ဘွဲ့ မဟာ ဘွဲ့ ပါရဂူ ဘွဲ့ ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ ဘွဲ့ကြို ဒီပလိုမာ
၁။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ၅၇၁ – – ၂၄ –
၂။ ၂၀၀၄ ၃၁၀ – – ၁၂ –
၃။ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ၃၇၄ – – – –
၄။ ၂၀၀၅ ၆၆၄ – – ၁၇ –
၅။ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၉၇၀ – – ၂၁ –
၆။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၇၇၃ – – ၆၁ –
၇။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၄၃၆ ၉ – – –
၈။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၄၅၃ ၁၅၄ – – –
၉။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၄၁၄ ၈၀ – – –
၁၀။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၃၄၀ ၇၀ – – –
၁၁။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၂၃ ၂၀ – – –
၁၂။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၅၉ – – – –
၁၃။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၄၃ – – – –
၁၄။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၂၂ – – – –
၁၅။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ – – – – –
၁၆။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၃၄၆ – – – –
၁၇။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၃၈၂ – – – –
၁၈။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၅၁ ၂ – – –
၁၉။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၉ – – – –